Denmark waxay soo afjartay dhammaan xannibaadihii COVID-19 kadib xannibaadii 548 maalmood
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Denmark War Deg Deg Ah » Denmark waxay soo afjartay dhammaan xannibaadihii COVID-19 kadib xannibaadii 548 maalmood
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Denmark War Deg Deg Ah • Education • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Safarka Tareenka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Laga bilaabo saqda dhexe ee Sebtember 10, fayraska COVID-19 mar dambe dawladda Denmark uma aqoonsana "cudur bulsho muhiim u ah".
Mas'uuliyiinta Denmark ayaa ku dhawaaqay in cudurka la xakameeyay.
Ma jiraan wax tallaabooyin gaar ah oo laga hirgelin doono Danmark si wax looga qabto COVID-19 laga bilaabo Sebtember 10.
Mas'uuliyiinta deenishku waxay xaq u leeyihiin inay xoojiyaan tillaabooyin gaar ah "haddii masiibadu mar kale khatar geliso shaqooyinka muhiimka u ah bulshada".
Mas'uuliyiinta dowladda Denmark ayaa ku dhawaaqay in laga bilaabo 12:00 am subaxnimo Sebtember 10, fayraska COVID-19 aan hadda lagu tilmaamin "cudur bulsho muhiim u ah" dalka, mana jiri doono tallaabooyin gaar ah oo lagula tacaalayo coronavirus gudaha xuduudaha Denmark.
Dhammaan qawaaniintii ka-hortagga COVID-19 ee si habsami leh ayaa looga joojiyay dalka illaa maanta, taasoo samaysay Denmark dawladdii ugu horreysay ee ka tirsan Midowga Yurub (EU) oo si buuxda ugu soo noqota hawl-maalmeedkii hore ee faafa.
Dhammaan xannibaadihii ay horay u dhaqan geliyeen mas'uuliyiinta deenishka, oo ay ku jiraan shuruudaha gudbinta COVID si loo galo naadiyada habeenkii iyo goobaha kale, mamnuucidda isu imaatinnada ballaaran iyo xirashada maaskaro qasab ah, ayaa la qaaday, 548 maalmood ka dib markii Ra'iisul Wasaaraha Denmark Mette Frederiksen uu markii hore ku dhawaaqay xannibaadda dalka.
Bishii Maarj 2020, Danmark waxay ka mid ahayd waddammadii ugu horreeyay ee dhaqan geliya tallaabooyin adag oo lagula dagaallamayo COVID-19.
Markii ugu horreysay ee ay ku dhawaaqeen go'aanka ah inay ka tanaasulaan aasaaska sharciga ee xayiraadaha bishii la soo dhaafay, mas'uuliyiinta deenishka ayaa yiri "cudurka ayaa la xakameeyay." Waxay xaq u leeyihiin inay xoojiyaan tillaabooyin gaar ah “haddii masiibadu mar kale halis geliso shaqooyinka muhiimka u ah bulshada.”
Sida laga soo xigtay mas'uuliyiinta caafimaadka ee Denmark, "diiwaangelinta heerarka tallaalka ee sarreeya" waxay ka caawisay waddanku inuu dejiyo tusaalaha Midowga Yurub oo uu ku soo laabto nolosha iyada oo aan lahayn xannibaadyo la xiriira COVID haba yaraatee. Afar ka mid ah afarta qof ee deenishka ah saddex ka mid ah ayaa u arka tallaalka fayraska inuu yahay waajibaad madaniga ah, sida lagu sheegay sahan Eurobarometer ah oo la sameeyay bishii hore isagoo matalaya baarlamaanka Yurub.
Kun qof oo deenish ah oo si gaar ah loo soo xulay, 1,000% ayaa gebi ahaanba oggolaaday bayaankii ahaa in qof walba la tallaalo, halka 43% ay sheegeen inay u badan yihiin inay oggolaadaan. Guud ahaan Midowga Yurub, boqolkiiba dadka gebi ahaan ama inta badan ku raacsan bayaanku waa 31.
Bishii Sebtembar, in ka badan 73% dadweynaha Denmark oo ahaa 5.8 milyan ayaa si buuxda loo tallaaley, iyada oo in ka badan 8.6 milyan oo qiyaasood oo anti-COVID ah la maamulay guud ahaan. Intii lagu jiray cudurka faafa, Danmark waxay diiwaangelisay in ka badan 352,000 xaaladood oo fayraska ah.